IWorld Trade Center – ukuhlaselwa okuhleliwe okwenziwe ngumuntu waseBrazil – JucelinoLuz
Águas de Lindoia, Septhemba 10, 2021
Ukuhlaselwa kwangoSepthemba 11, 2001 noma ukuhlaselwa kwamaphekula (kwesinye isikhathi kubhekiswa nje ngoSepthemba 11) kwakuwuchungechunge lokuhlaselwa ngokuzibulala ngokumelene ne-United States okwakuqondiswa yinhlangano yamafilosofi nezinye izinhlamvu ezifihliwe ongasaba ukuzazi – ngokubanda kwamakhaza. Iphupho lokuqala likaJucelino Luz likhombise ukuthi ekuseni ngalolo suku, cishe amaphekula ayishumi nesishiyagalolunye athumba izindiza ezine zabagibeli. Iyalelwa ngabantu abaningi nabahleli abavela ngaphakathi kwe-US nangaphezulu. Abaduni bashayise ngamabomu (bayalela) izindiza ezimbili eTwin Towers zesakhiwo sebhizinisi i-World Trade Center eNew York City, kwashona wonke umuntu owayesemkhunjini kanye nabantu abaningi abasebenza ezakhiweni. Ngokusho kwemibono, zombili lezi zakhiwo zingawa kungakapheli amahora amabili imithelela, icekele phansi izakhiwo ezingomakhelwane futhi idale nokunye ukulimala okuhlukahlukene. Indiza yesithathu yabagibeli yaphahlazeka ePentagon, ikomkhulu loMnyango Wezokuvikela wase-US, e-Arlington County, eVirginia, ngaphandle kwaseWashington, DC Indiza yesine yaphahlazeka enkundleni evulekile ngaseShanksville, ePennsylvania, kamuva abanye babagibeli bayo nabasebenzi bayo bezama ukuthola kabusha ukulawula izindiza kubaduni, abebekade beyinikeze indlela eya enhlokodolobha yase-US. Abekho abasindile kunoma yiziphi izindiza. Zembulwa izingxenye zamaphupho wangaphambi kokuthola.
Balinganiselwa ku-3 000 abantu abashonile ngesikhathi kuhlaselwa, kubalwa izakhamizi ezingama-227 kanye nabaduni abangu-19 abebesendizeni. Iningi lezisulu kwakuyizakhamizi, kufaka nezakhamizi ezivela emazweni angaphezu kwama-70. Ngaphezu kwalokho, kukhona okungenani ukufa kwesibili okukodwa – umuntu oyedwa ukhishiwe ekubalweni ngumhloli wezokwelapha, okubikwa ukuthi wabulawa yisifo samaphaphu ngenxa yokuchayeka othulini ngokuwa kweWorld Trade Center. Futhi ngubani owayaleze futhi wahlela konke lokhu kuhlaselwa, okubi kakhulu, ukwazi.
Izwe laseMelika liphendule ekuhlaselweni ngokwethulwa kweMpi Yobuphekula: izwe lahlasela i-Afghanistan ukuyoketula iTaliban, eyathatha namuhla futhi, eyayivikela amaphekula. Izwe laseMelika liphasise nomthetho i-USA PATRIOT Act. Amanye ama-stock exchange aseMelika avaliwe isonto lonke kulandela ukuhlaselwa futhi aqopha ukulahleka okukhulu ngesikhathi kuvulwa kabusha, ikakhulukazi ezimbonini zezindiza nezimboni zomshuwalense. Ukunyamalala kwezigidigidi zamaRandi emahhovisi abhujisiwe kudale umonakalo omkhulu emnothweni waseLower Manhattan, eNew York. Futhi nezinto eziningi ezisacashile futhi ezingachazelwanga kahle kubantu baseMelika.
Njengoba kufihlekile futhi kuyesabeka, ukugonywa okuphoqelekile kweCovid19, okubekwe nguMongameli wamanje uJoe Biden – e-USA. Ukucabanga ukuthi isimangaliso sizokwenzeka ngalokhu kugoma. (Kungabulala abantu abaningi abangenacala, kunegciwane uqobo)
Ngaleso sikhathi, lezi zincwadi zazicutshungulwa, ukugwema ukuvukela umphakathi iziphathimandla kanye nabantu ababambe iqhaza ekuphathweni kolwazi nakwabezindaba bomhlaba.
Umonakalo wePentagon walungiswa kungakapheli unyaka, kanti iSikhumbuzo sePentagon sakhiwa eduze kwalesi sakhiwo. Inqubo yokwakha kabusha iqale esizeni seWorld Trade Center. Ngo-2006, kwaqedwa umbhoshongo omusha wamahhovisi esizeni, iWorld Trade Center 7. Umbhoshongo i-One World Trade Center, owakhiwe esizeni, ungomunye wamabhilidi amade kunawo wonke eNyakatho Melika, ngamamitha angama-541 ukuphakama. Kuhlelwe ukuthi kwakhiwe ezinye izakhiwo ezintathu esizeni seTwin Towers yangaphambili, kanye nesikhumbuzo sezisulu zokuhlaselwa osekuqediwe. INational Flight 93 Memorial yaqala ukwakhiwa ngoNovemba 8, 2009 kanti isigaba sokuqala sokwakhiwa saphothulwa ngosuku lweshumi leminyaka lokuhlaselwa kukaSepthemba 11 ngo-2011.
Namuhla, sekuphele iminyaka engama-20 kwahlaselwa le mibhoshongo engamawele, siyethemba ukuthi ngeke isaphindwa, sikhumbula ukuthi i-oracle ithumela cishe izinhlamvu eziyi-134, ngomzamo wokugwema ukuhlaselwa kukaSepthemba 11, 2001, kanye nokuzama sindisa izimpilo zabantu abacishe babe ngu-3 000 abangenacala, lapha kubhaliswa enye yezincwadi ezithunyelwe kwiZizwe Ezihlangene, nezimpendulo zezombusazwe ezivela kuleyo nhlangano ebalulekile.
Ekugcineni, sishiya intela yethu engokomfanekiso kuzo zonke izisulu zeWorld Trade Center
UProfesa Jucelino Luz – isishoshovu, umgqugquzeli, isazi sezemvelo, umbhali kanye nomhlahlandlela wokomoya